Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Desambra 2019 à 18:53
1 352 octets ajoutés , il y a 9 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Novambra 2019 à 03:24 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Desambra 2019 à 18:53 (hanova) (esory)
== Ny orim-bintana roa ambin'ny folo ==▼
=== FanamarihanaFifandraisan'ny vitana mialoha ===
Ny vintana roa mialoha sy manaraka ny renivintana iray dia zanabintan'ity renivintana ity, ka ilay mialoha azy dia lazaina fa "babeny" ary ilay manaraka azy dia atao hoe "trotroiny". NyNoho vintanaizany, iray eo amin'ny zoron-tranoAlahamady namitrotro lafin-tranony iray syAdaoro, ny vintanaAsorotany iraymitrotro hafany izayAkahasaty, eo amin'ny zoron-tranoAdimizana namitrotro lafin-tranony mifanatrikaAlakarabo, amin'ioary (manomeny zoroAdijady 180°)mitrotro dia lazaina hoe mifandratra. Tsy maintsy renivintana no mifandratra amin'ny renivintanaAdalo. Ny renivintanaAlohotsy irayest diaporté mitanilasur nale miarinados eo amind'nyAlahamady zanabintanamibaby roan'ny renivintanaAlohotsy, mifandratrany aminy.Asorotany Nymibaby zanabintana iray dia mitanila na miarina eo amin'ny renivintanaAdizaoza, mifandratra amin'ny renivintanaAdimizana mibaby na mitrotro azy. Ny zanabintana trotroina dia tsy maintsy mifandratra amin'ny zanabintana trotroinaAsombola, ary ny zanabintanaAdijady babenamibaby dia tsy maintsy mifandratra amin'ny zanabintana babenaAlakaosy.
==== NyVintana tonon'andro"mifanoto" syna ny"mifanohitra" fitetezananana andro"mifandratra" ====
=== Ny tonon'andro sy ny fitetezanana andro ===
==== Vava, vonto, vody ====
Mitondra tonon'andro telo izay antsoina hoe "vava" (na "vavany") sy "vonto" ("vontony") ary "vody" (na "vodiny") ny renivintana, fa tsy mitondra afa-tsy tonon'andro roa atao hoe "vavany" sy "vodiny" ny zanabintana. Ao anatin'ny iray volana dia mifanarakaraka araka ny filaharany ny vintana ka ny vavan'ny vintana mitovy anarana amin'ny [[Volana (fotoana)|volana]] diavina no anombohana (ohatra, vava Alahamady); andro ahatsinanan'ny [[Volana]] izany.
Tsy isaina ho andro voalohany ao amin'ny volana ny tonon'andro iray raha tsy tsinana alohan'ny mitataovovonan'io andro io ny Volana. Miteraka fahasamihafana arakaraka ny faritra anaovana fanandroana izany satria tsy ny amin'ny 12 ora antoandro amin'ny famantaranandro araka ny hasin'ora nifanarahana izany. Ny mitataovovonana any amin'ny faritra atsinanana indridra eto Madagasikara dia tsy mitataovovonana any amin'ny faritra andrefana. Raha tonon'andro vava Alahasaty amin'ny volana Alahasaty, ohatra, no mifanojo amin'ny andro Alatsinainy any andrefana, dia mety efa vonto Alahamady ny any atsinanana, raha ohatra ka manodidina ny mitataovovonana ny nahatsinanan'ny Volana. Mety hiteraka fahadisoana ny tsy fahitana ny fotoana "ahafatesana" ahatsinanan'ny Volana noho ny fisian'ny rahona ka misakana ny fijerena izany na noho ny hakamoan'ny mpanandro mamono Volana an-trano.▼
* Vava Alahamady, vonto Alahamady, vody Alahamady,
Ny ao anatin'ny iray volana malagasy anefa mety misy 28 hatramin'ny 30 andro. Ny 29 sy ny 30 andro no matetika indrindra satria maharitra 29 andro sy 12 ora ary 44 minitra ny tsingerim-pihodinan'ny [[Volana]] amin'ny Tany. Raha misy 28 andro ny iray volana dia mifarana amin'ny vodin'ny vintana mitovy anarana amin'ny volana eo aloha ny volana diavina (ohatra, vody Alohotsy, raha ny volana Alahamady no diavina). Raha tsy tsinana ny Volana alohan'ny mitataovovonan'ny faha-29 andro dia lasa misy 29 andro ny iray volana ka mifarana amin'ny vavan'ny vintana mitovy anarana aminy io volana diavina io (ohatra, vava Alahamady, raha ny Alahamady no volana diavina). Fa raha mbola tsy tsinana ihany ny Volana amin'ny faha-30 andro dia misy 30 andro ny iray volana ka mifarana amin'ny vodiny na ny vonton'ny vintana mitovy anarana aminy io volana diavina io, ka vodiny raha zanabintana fa vontony raha renivintana.▼
* Vava Adaoro, vody Adaoro,
* Vava Adizaoza, vody Adizaoza,
* Vava Asorotany, vonto Asorotany, vody Asorotany,
* Vava Alahasaty, vody Alahasaty,
* Vava Asombola, vody Asombola,
* Vava Adimizana, vonto Adimizana, vody Adimizana,
* Vava Alakarabo, vody Alakarabo,
* Vava Alakaosy, vody Alakaosy,
* Vava Adijady, vonto Adijady, vody Adijady,
* Vava Adalo vody Adalo,
* Vava Alohotsy, vody Alohotsy,
==== Ny toetra ankapobenFanombohan'ny tonon'androtononandro ====
▲Tsy isaina ho andro voalohany ao amin'ny volana ny tonon'andro iray raha tsy tsinana alohan'ny mitataovovonan'io andro io ny Volana. Miteraka fahasamihafana arakaraka ny faritra anaovana fanandroana izany satria tsy ny amin'ny 12 ora antoandro amin'ny famantaranandro araka ny hasin'ora nifanarahana izany. Ny mitataovovonana any amin'ny faritra atsinanana indridra eto Madagasikara dia tsy mitataovovonana any amin'ny faritra andrefana. Raha tonon'andro vava Alahasaty amin'ny volana Alahasaty, ohatra, no mifanojo amin'ny andro Alatsinainy any andrefana, dia mety efa vonto Alahamady ny any atsinanana, raha ohatra ka manodidina ny mitataovovonana ny nahatsinanan'ny Volana. Mety hiteraka fahadisoana ny tsy fahitana ny fotoana "ahafatesana" na ahatsinanan'ny Volana noho ny fisian'ny rahona ka misakana ny fijerena izany na noho ny hakamoan'ny mpanandro "mamono Volana an-trano".
==== Isan'ny andro ao anaty iray volana ====
▲Ny ao anatin'ny iray [[Tetiandro malagasy|volana malagasy]] anefa mety misy 28 hatramin'ny 30 andro. Ny 29 sy ny 30 andro no matetika indrindra satria maharitra 29 andro sy 12 ora ary 44 minitra ny tsingerim-pihodinan'ny [[Volana]] amin'ny Tany. Raha misy 28 andro ny iray volana dia mifarana amin'ny vodin'ny vintana mitovy anarana amin'ny volana eo aloha ny volana diavina (ohatra, vody Alohotsy, raha ny volana Alahamady no diavina). Raha tsy tsinana ny Volana alohan'ny mitataovovonan'ny faha-29 andro dia lasa misy 29 andro ny iray volana ka mifarana amin'ny vavan'ny vintana mitovy anarana aminy io volana diavina io (ohatra, vava Alahamady, raha ny Alahamady no volana diavina). Fa raha mbola tsy tsinana ihany ny Volana amin'ny faha-30 andro dia misy 30 andro ny iray volana ka mifarana amin'ny vodiny na ny vonton'ny vintana mitovy anarana aminy io volana diavina io, ka vodiny raha zanabintana fa vontony raha renivintana.
▲== Ny orim-bintana roa ambin'ny folo ==
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/978146"